Kufsiga oo ku batay Somaliland - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Kufsiga oo ku batay Somaliland
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 21 Abriil, 2013, 15:17 GMT 18:17 SGA
Saddexdii bilood ee ugu horaysay sanadkan inta la diiwaan galiyay Hargaysa oo dhaqtarka la keenay waa siddeetan kufsi oo u badan carruur.
Toddobaadkan gudahiisa waxaa isbitaalka la keenay laba carruur oo la kufsaday oo toddobo iyo lix jir ah. Saddexdii bilood ee ugu danbaysay wuxuu isbitaalka diiwaangaliyay siddeetan qof oo la kufsaday oo u badan carruur.
Aad ayuu u kordhay kufsiga oo sanadkii hore inta la diiwaan galiyay ay ahayd 182 kufsi. Kufsiga ayaan laga hadlin bulshada Soomaalida dhexdeeda, mana jiro sharciyo adag oo ilaalinaya ammaanka dumarka Soomaalida.
Waxaa la soo gabagabeeyay shir ku saabsan la dagaalanka kufsiga oo ururada xuquuqda biniaadanka ay soo qabanqaabiyeen. Gudoomiyaha gudiga sare ee ilaalinta xuquuqda bini'aadanka Fatxiya Xaaji Xuseen Jaahuur ayaa uga warantay kufsiga soo batay wariyaha BBC Axmed Saciid Cige.
21 Agoosto 2014
US oo lahaysteyaal soo dayn wayday